Joewell ကတ်ကြေး Joewell ရောင်းရန်ဆံပင်အလှပြုပြင်စရာကတ်ကြေး - Japan Scissors
ပင်မစာမျက်နှာ / Joewell ဂျပန်မှဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး / 1 ၏စာမျက်နှာ 2
Joewell LC လက်ဝဲဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေး
Joewell ကပျကြေး $ 449.00 AUD
Joewell ကပျကြေး $ 649.00 AUD $ 699.00 AUD
Joewell ကပျကြေး $ 699.00 AUD
Joewell Classic PRO ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ခြင်း
Joewell ကပျကြေး $ 349.00 AUD
Joewell FX Pro ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်စက်
Joewell ကပျကြေး $ 699.00 AUD $ 999.00 AUD
Joewell အဓိပတိ Offset ဆံပင်ကတ်ကြေး
Joewell ကပျကြေး $ 849.00 AUD $ 1,200.00 AUD
Joewell ကပျကြေး $ 549.00 AUD
Joewell FX ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်
Joewell ကပျကြေး $ 599.00 AUD $ 799.00 AUD
Joewell FX လက်ဝဲဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်း
Joewell ကပျကြေး $ 749.00 AUD $ 999.00 AUD
Joewell ကပျကြေး $ 649.00 AUD $ 799.00 AUD
Joewell တိုက်တေနီယမ် TR ဆံပင်ကတ်ကြေး
Joewell ကပျကြေး $ 749.00 AUD $ 899.00 AUD
Joewell ကပျကြေး $ 1,399.00 AUD $ 1,599.00 AUD
Joewell ကပျကြေး $ 899.00 AUD $ 1,200.00 AUD
Joewell ကပျကြေး $ 999.00 AUD $ 1,400.00 AUD
Joewell အရောင် C ဆံပင်ကတ်ကြေးကိရိယာအစုံ
Joewell Ergo ZII ဆံပင်ညှပ်
Joewell ကပျကြေး $ 549.00 AUD $ 699.00 AUD
Joewell X Offset ဆံပင်ကတ်ကြေး
Joewell ကပျကြေး $ 399.00 AUD $ 449.00 AUD
အကြောင်းပို Read Joewell ဂျပန်မှဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး
Joewell 100% ဂျပန်အတွက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ၁၉၁၇ အစောပိုင်းကတည်းကအလှပြင်ဆိုင်ကတ်ကြေး။ အဆိုပါ Joewell နှင့် Tokosha ညှပ်များကိုရိုးရှင်းသောဂျပန်သံမဏိဖြင့်ရိုးရှင်းသောကတ်ကြေးပုံစံများဖြင့်တည်ဆောက်သည်။
ဤ Joewell ကတ်ကြေးသည်သြစတြေးလျတွင်ပေါ့ပါး။ ကြာရှည်ခံသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောချွန်ထက်သောခုံးပြားများရှိသည်ဟုနာမည်ကြီးသည်။
အကြောင်းပို Read Joewell
အကောင်းဆုံးဂျပန် Joewell ကတ်ကြေးပုံစံများတွင်
အမည် ပုံစံ စျေးနှုန်း
လွန်ကဲသော ခုံး Edge $ 500-1000
ဘော့ ရိုးရာခုံး Edge $ 300-600
FX (FX-PRO) ထူးခြားသော 3D လက်ကိုင်ဖြင့် Offset Convex Edge $ 500-1000
TR တိုက်တေနီယမ်ခုံး Edge $ 800-1300
AR ထူးခြားသော Ergonomic ကိုင်တွယ်မှု $ 900-1300
C အမြဲတမ်းအနားယူမှုနှင့်အတူ Ergonomic ကိုင်တွယ် $ 600-900
JKX ရှည်လျားသော Joewell ဘာဘာဓားညှပ် $ 800-1500
FZ ဘာဘာ ရှည်လျားသော Ergonomic ဘာဘာညှပ် $1000
ဂန္ ရိုးရှင်းသောပေါ့ပါးပြီးရိုးရှင်းသောဆံပင်ညှပ် $ 300-500
ယာဉ် ထူးခြားသော 3D ချုပ်ကိုင်မှုဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး $ 500-1000
Z II သေးငယ်သောလက်ချောင်းအပေါက်များနှင့်ပေါ့ပါးသော ergonomic ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး။ $ 400-800
SDB တစ် ဦး ကကွေး Blade ကိုနှင့်အတူထူးခြားသောဆံပင်ဖြတ်တောက်မှုကတ်ကြေး $ 600-1000
JDB ခြောက်သွေ့သောဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက် ၀ ါး Blade $ 800-1200
အခြားဂျပန်ညှပ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, Joewell အိမ်တွင်းဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်တတ်နိုင်သောနှင့်စျေးကြီးသောပရီမီယံမော်ဒယ်များကိုပြုလုပ်ရန်အာရုံစိုက်သည်။
ထုတ်လုပ်သောဆံပင်ကတ်ကြေးများ ဂျပန် Iwate ၌တည်ရှိ၏။ Iwate Japan စက်ရုံသည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်အလုပ်သမားများအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည် Joewell အမှတ်တံဆိပ်။
ဘာဖြစ်တာလဲ Joewell (Tokosha) ကတ်ကြေးကအရမ်းကောင်းပါသလား။
Joewell ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများမှအရည်အသွေးမြင့်ဂျပန်သံမဏိကိုဝယ်ယူ Hitachi သံမဏိ။ ၎င်းသည်သူတို့ကိုဖန်တီးရာတွင်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပရီမီယံသံမဏိများကိုအသုံးပြုစေသည် Joewell ကတ်ကြေး။
Joewell ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေးများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ရန်လည်းအချိန်ယူရသည်။ ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်အခြားမော်ဒယ်များကိုသာကူးယူပြီးဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပါ Joewell စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောဆံပင်ညှပ်သမားနှင့်ဆံပင်ညှပ်စျေးကွက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်နှစ်စဉ်မော်ဒယ်များနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုတိုးတက်စေသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သည် Joewell ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်တင်းကြပ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအရည်အသွေးအာမခံချက်နှင့်စစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပါ ၀ င်သည်။ ကတ်ကြေးတစ်စုံစီသည်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဲ့သို့ကောင်းသည်ကိုသေချာစေသည်။
Joewell ကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင်တည်နေရာများရှိပြီး ၁၉၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာအနှံ့ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးစျေးကွက်တွင် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဓိကတိုင်းပြည်တိုင်းနီးပါးမှ ၀ ယ်သည် Joewell အကောင်းဆုံးဂျပန်ကတ်ကြေးတံဆိပ်ဖြစ်သောကြောင့်သြစတြေးလျဆံပင်အလှပြင်သူများနှင့်ဆံပင် ၀ ယ်သူများက ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားနေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ Joewell (Tokosha) ညှပ်။
ကျနော်တို့ပြသသော 100% စစ်မှန်ခြင်းနှင့်အစစ်အမှန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိသည် Joewell ထိပ်တန်းအကွာအဝေးရှိဂျပန်ဆံပင်ကတ်ကြေးနှင့်ပတ်သက်လျှင်ကတ်ကြေးသည်ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သည်။
ငါသုံးပြီးပြီ Joewell လွန်ခဲ့သောအနှစ် 20 သည်။ စျေးသက်သာသောဒေါ်လာ ၃၀၀ တွဲသည်ငါးနှစ်သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို၍ ကြာရှည်ပြီး၎င်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်စံပြမျိုးများရှိသည်။ စန်ဒရာ (မဲလ်ဘုန်းဆံပင်ကျွမ်းကျင်သူများ)
ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအမှတ်တံဆိပ်တွေအများကြီးအွန်လိုင်းရရှိနိုင်နှင့် Joewell လာမယ့်ခိုင်မာတဲ့ရပ် Yasaka, Mizutani နှင့် Juntetsu တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုချွန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းနည်း Joewell ကတ်ကြေးလား။
သင်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဆံပင်ညှပ်များကို ၀ ယ်သည့်အခါသင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးကပ်ညှပ်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလိုအပ်သည် Joewell ကပျကြေး?
သြစတြေးလျတွင်လက်တဆုပ်စာဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းအကြံပြုပါသည် Joewell တိုက်ရိုက်။
သင်၏လုပ်သူနှင့်အတူတူပင်ပညာရှင်များရှိသည် Joewell သင့်အတွက်ကတ်ကြေးများကိုထက်စေမည်။
အဆိုပါ Joewell ကတ်ကြေးချွန်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြုပြင်ခြင်းများသည်သင်၏မည်သည့်အတွဲမဆိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးတိုးတက်စေသည် Joewell ညှပ်။
ခန့်မှန်းခြေအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုခန့်မှန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ပတ် Joewell သင့်ရဲ့ကတ်ကြေးများကိုထက်မြက်စေပြီးပြုပြင်လိမ့်မည်။
Japan Express Post ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ချွန်ထက်သောကတ်ကြေးများကိုinစတြေးလျသို့ပြန်ပို့ရန်ရက်အနည်းငယ်သာကြာသည်။
$ 60-120 အတွက်သင့်မှာရှိနိုင်ပါတယ် Joewell ကတ်ကြေးများကိုဂျပန်၌ပြုလုပ်သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးချွန်ထက်သောဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်ပါ Joewell ဂျပန်။
အကောင်းဆုံး Joewell ကတ်ကြေးပုံစံများ
စာရင်း Joewell ကတ်ကြေးများကတ်ကြေး၊ ပါးလွှာသောအရာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်သည်။
ထိုအားလုံး Joewell ကတ်ကြေးများကိုဂျပန်တွင်တစ်သက်တာအာမခံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
အဆိုပါ Joewell Classic အကွာအဝေးဟာအထင်ကရမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့သည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်နှင့်အတူဤဂန္ထဝင်ဒီဇိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
အရည်အသွေးမြင့်သောဂျပန်သံမဏိများကို အသုံးပြု၍ သူတို့သည်သူတို့၏ခုံးအနားသတ်များနှင့်အဖြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များပေးသည်။
အခြေခံ Joewell ဓါးရွက်
Joewell ဂန္ထဝင် Serrated
လူကြိုက်များ၏တစ် ဦး က serrated ဗားရှင်း Joewell ဂန္ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး။
ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းနှင့်အခြေခံ ergonomics ။
တစ် ဦး က serrated Joewell ဓါးရွက်
အဆိုပါ Joewell ခေတ်သစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံး Entry Level ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးဖြစ်ပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့်သောဂျပန်သံမဏိကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်အခြေခံဒီဇိုင်းရှိသည်။
သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်အရွယ်အစားလာ:5", 5.5" နှင့်6"။
အဆိုပါ Joewell SZ offset စီးရီး ergonomics အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
Semi offset လက်ကိုင်ဒီဇိုင်းသည်ဆံပင်ညှပ်သမား၏လက်သို့ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။
တစ်ခုံး Joewell ဓါးရွက်
Joewell X စီးရီး
အဆိုပါ Joewell X စီးရီးသည်အခြားမော်ဒယ်များတွင်ထူးခြားသည့် 3D ဆုပ်ကိုင်ဒီဇိုင်းပါရှိသည်။
၎င်းသည်ခိုင်မြဲပြီးကြံ့ခိုင်သောဆုပ်ကိုင်မှုကိုခွင့်ပြုသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ပေါ့ပါးပြီး offset ergonomics ကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ချွန်ထက်သောဂျပန် Joewell ခုံးအစွန်းဓါးလွယ်ကူသောဖြတ်တောက်မှုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အနားရှိပါတယ်။
နိဂုံး: ငါဝယ်သင့်ပါတယ် Joewell ကတ်ကြေးလား။
Joewell ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Iwate ရှိ Sendai တွင်အရည်အသွေးမြင့်ကတ်ကြေးများကိုဒေါ်လာ ၃၀၀ မှ ၂၀၀၀ ကြားထုတ်လုပ်သည်။
Joewell ဂျပန်သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောဒီဇိုင်းများ၊ ချွန်ထက်သောခုံးများနှင့်ကုတ်တံစွန်းဓါးများကိုကျွမ်းကျင်သောဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများနှင့်ကိုက်ညီသောထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ergonomics ဖြင့်အာရုံစိုက်သည်။
ဂျပန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောသံမဏိကို အသုံးပြု၍ ပေါ့ပါးပြီးချွန်ထက်သောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း (ဂျပန်တွင်ပြုလုပ်သည်)
၎င်းတို့တွင်နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင်ရုံးများဖွင့်လှစ်ထားပြီး ၁၉၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်မှုတွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သင်တစ်စုံဝယ်သင့်ပါတယ် Joewell ကတ်ကြေးလား။ ၄ င်းတို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏နာမည်အကြီးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူလူတိုင်း၏စျေးနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောမော်ဒယ်များရှိသည်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၂၀၀ အထိစျေးသက်သာတဲ့ကတ်ကြေးတစ်စုံကို ၀ ယ်နိုင်ပါတယ် Minaဒါပေမယ့်တစ်စုံ၏ခြုံငုံအရည်အသွေးကို Joewell (Tokosha) ညှပ်ကသူတို့ကို ၀ ယ်ယူထိုက်သည်။
အကြောင်းပိုမို Read Joewell သြစတြေးလျကတ်ကြေး ဒီမှာ!
Joewell ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များ မှစ၍ သြစတြေးလျသို့တင်ပို့ခဲ့သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
ဆစ်ဒနီ၊ တိုကျိုနှင့်လန်ဒန်ရှိဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးပြပွဲသို့သွားသောအခါ၊ Joewell အဲဒီမှာရှိလိမ့်မယ်။
တရားဝင်ကြည့်ပါ Joewell ဒီမှာကတ်ကြေးစုဆောင်းခြင်း !!
အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ Joewell ဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကတ်ကြေး
လူအများစုကမေးသည်လား Joewell ကတ်ကြေးသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်ကောင်းသောတံဆိပ်ဖြစ်သည်!
၎င်းတို့သည် ၁၉၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အကြီးမားဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်တစ်ခုရှိသည်။
ဤတွင်ထံမှကိုးကားအနည်းငယ်ရှိပါတယ် Joewell တိုကိုရှာစည်းဝေးကြီး။
ဤကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းသောအရာများကိုပြောရန်လွယ်ကူသော်လည်းကျွမ်းကျင်သူများ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်အကြီးမားဆုံးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ငါသုံးတယ် Joewell ငါသူတို့စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သောကြောင့်, ကတ်ကြေး။ နှစ်သိမ့်မှုများစွာပေးသည်။ ခရစ် Foster အားဖြင့်ဆံပင်
“ ငါသူတို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ လောက်ကအသုံးပြုခဲ့တာပါ။ ဓါးသွားတွေကအမြဲတမ်းတကယ့်ကိုတကယ့်ကိုထက်မြက်နေတယ်။ သူတို့ဟာအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ကတ်ကြေးတွေပါ။ ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးအလေးချိန်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုသင်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေစဉ်၎င်းတို့သည်ဤမျှကာလကြာရှည်စွာတည်ရှိသည်။ သူတို့ဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်၊ သူတို့ဟာငါ့အကြိုက်ဆုံးကတ်ကြေးဖြစ်တယ်၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း
ဘာကြောင့် Joewell အမှတ်တံဆိပ်ပိုလူကြိုက်များသည်
ထဲကအခြေခံ Sakai, ဂျပန်ဤဆံပင်ညှပ်ပစ္စည်းများကိုသုတေသနပြု၊
ကိုးကားချက်များ: ပိုမိုဖတ်ပါ Joewell ကပျကြေး
ဂျပန်ညှပ်: Joewell ကတ်ကြေးတံဆိပ်
ဘာဘာကတ်ကြေးသြစတြေးလျ Joewell ကတ်ကြေးတံဆိပ်
ကနေဒါမှဂျပန်ကတ်ကြေးဆိုင်: Joewell အမှတ်တံဆိပ်
ဂျပန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Joewell ကပျကြေး